ကား ၂ စီးဆင့်တိုက်မှုကြောင့် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မင်းသမီးရဲ့ မှုခင်းဖြစ်ရပ်မှန်ထွက်ပေါ် – Shwe Yaung Lan
ပျိုမေတို့ တစ်လတစ်ခါကြုံတွေ့ရတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုဝေဒနာကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ?
ဇနီးဖြစ်သူဟာ မယားငယ်မဟုတ်ကြောင်း တုန့်ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ကိုဥက္ကာကျော်
ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အမွှေးတိုင် အန္တရာယ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ…!
မီးပျက်ပြီး ပူပြင်းတဲ့ညတွေမှာ ကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေရန် လုပ်သင့်သည်များ
မိန်းမချောလေးတွေလို့ ထင်မှတ်ရလောက်အောင် အရမ်းကိုလှနေတဲ့ လေဒီဘွိုင်း ၁၀ ယောက်
အမျိုးသမီးတိုင်း လျစ်လျှူရှုမထားသင့်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများ
ကား ၂ စီးဆင့်တိုက်မှုကြောင့် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မင်းသမီးရဲ့ မှုခင်းဖြစ်ရပ်မှန်ထွက်ပေါ်
On May 9, 2019 By Suki
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၈ ရက်နေ့မှာတော့ ကိုရီးယားမင်းသမီး Han Jisung ဟာ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကား ၂ စီးဆင့်တိုက်ခံရမှုကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ အင်ချွန်းလေဆိပ်ကိုသွားတဲ့ အမြန်လမ်းတစ်နေရာမှာ တက္ကစီတစ်စီးနဲ့ အိမ်စီးဆလွန်းကားတစ်စီးရဲ့ ဆင့်တိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Han Jisung ဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့အတူသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခရီးသည်ခုံမှာ ထိုင်လာတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သန့်စင်ခန်းသုံးဖို့ အလျင်လိုလာတာကြောင့် ကားကို အချက်ပြမီးဖွင့်ပြီး နီးရာမှာရပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ Han Jisung အနေနဲ့ ကားအပြင်ဘက်ကို ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။
အစောပိုင်းမှာတော့ ခင်ပွန်းသည်ဟာ သူအနေနဲ့ သန့်စင်ခန်းသွားချင်လို့ ကားကိုရပ်ခိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ယာဉ်တိုက်မှုဟာ ဖြစ်ပွားပြီးပြီဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေ မယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့တွေက Han Jisung ကားရဲ့ Black Box ကို စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူပြောတဲ့စကားနဲ့ ကွဲလွဲချက်တွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။
Black Box က ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ အသံမပါပေမယ့် ရုပ်တွေကိုတော့ သေသေချာချာ ကွဲကွဲပြားပြား တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ Black Box မှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကားလမ်းတစ်ဖက်ကိုကူးမသွားခင် ကတည်းက Han Jisung ဟာ ကားထဲကနေ ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပြီး ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ဟာ ခင်ပွန်းသည် လမ်းတစ်ဖက်ကိုရောက်ပြီး ၁၀ စက္ကန့်အကြာမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ခင်ပွန်းသည်အနေနဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားတာကို လုံးဝမသိနိုင်စရာမရှိတဲ့ အခြေအနေပါ။
နောက်ပြီး မေလ ၉ ရက်နေ့မှာ စစ်ဆေးချက်တွေအရလည်း ခင်ပွန်းသည်ဟာ သူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တချို့ကို ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခင်ပွန်းသည်က သူ့အနေနဲ့ အဲဒီညမှာ အရက်သောက်ထားတဲ့အကြောင်းဖွင့်ဟခဲ့တာပါ။ မျက်မြင်သက်သေတစ်ယောက်ကလည်း “အခုလေးတင် အဲဒီနေရာကနေ ကျွန်တော်ဖြတ်လာတာပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကားနောက်ကနေ တစ်ခုခုကို ပစ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်”ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကား ၂ စီးဆငျ့တိုကျမှုကွောငျ့ ကှယျလှနျသှားတဲ့ မငျးသမီးရဲ့ မှုခငျးဖွဈရပျမှနျထှကျပျေါ
ပွီးခဲ့တဲ့ မလေ ၈ ရကျနမှေ့ာတော့ ကိုရီးယားမငျးသမီး Han Jisung ဟာ အမွနျလမျးမကွီးပျေါမှာ ကား ၂ စီးဆငျ့တိုကျခံရမှုကွောငျ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့ရပါတယျ။ အငျခြှနျးလဆေိပျကိုသှားတဲ့ အမွနျလမျးတဈနရောမှာ တက်ကစီတဈစီးနဲ့ အိမျစီးဆလှနျးကားတဈစီးရဲ့ ဆငျ့တိုကျခွငျးကို ခံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ Han Jisung ဟာ ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့အတူသှားခဲ့တာဖွဈပွီး ခရီးသညျခုံမှာ ထိုငျလာတဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူက သနျ့စငျခနျးသုံးဖို့ အလငျြလိုလာတာကွောငျ့ ကားကို အခကျြပွမီးဖှငျ့ပွီး နီးရာမှာရပျလိုကျပါတယျ။ အဲဒီမှာ Han Jisung အနနေဲ့ ကားအပွငျဘကျကို ထှကျနတေဲ့အခြိနျမှာ အဲဒီဖွဈရပျဖွဈပှားခဲ့တာပါ။
အသကျ ၂၈ နှဈအရှယျရှိ Han Jisung ဟာ Kpop အဖှဲ့တဈဖှဲ့ဖွဈတဲ့ B.Doll အဖှဲ့ရဲ့ အဖှဲ့ဝငျဟောငျးတဈယောကျဖွဈပွီး ၂၀၁၀ ခုနှဈမှာ စတငျ Debut လုပျခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ Han Jisung ဟာ မငျးသမီး အဖွဈ ပွောငျးလဲခဲ့ပွီး ‘Second to Last Love’ Happy Sisters’ ‘Moonlit Gymnastics’ Sori: Voice from the Heart’ စတဲ့ဇာတျလမျးတှကေို ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။ Han Jisung ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလကမှ ထိမျးမွားလကျ ထကျခဲ့သူဖွဈပွီး သူမရဲ့ဈာပနအခမျးအနားကိုတော့ မလေ ၁၀ ရကျနမှေ့ာ ပွုလုပျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
PREVIOUS POST Previous post: ကျော်ကျော်နန္ဒ ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲမှာ ကျော်ကျော်နန္ဒ နဲ့အတူ တွဲက ခဲ့တဲ့ သင်းသင်း
NEXT POST Next post: ကမ္ဘာကျော် ရုပ်​ရှင်​တွေထဲက လူတိုင်းသတိမထားမိလိုက်​တဲ့ ထူးခြားချက်​ များ